Maxkamadda Alshabaab ee Baardheere oo xukuntay wiil iyo gabar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 24 February 2015 24 February 2015
Mareeg.com: Maxkamad Alshabaab oo ku taalo degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa xukun ku riday wiil iyo gabar la sheegay iney kala sineysteen, islamarkaana gabartu uur qaadday.
Qaadiga maxkamada ayaa sheegay in labada ruux oo lagu eedeeyay xad sino ah la horkeenay maxkamada, islamarkaana si sharciga waafaqsan xukunka loogu riday.
Dadka xukunka lagu riday ayaa kala ah: Maxamed Cabdulaahi Cali oo da’diisa lagu sheegay 22 sano jir iyo Aamina Xasan Sabdoow oo da’deeda lagu sheegay 14-sano jir.
Qaadiga maxkamada Shabaab ee degmada Baardheere, ayaa goob fagaare ah ka sheegay in labadaan ruux aysan guur soo marin sidaas darteed lagu xukumay min 100 garbaash oo xad ah, iyadoo Maxamed Cabdulaahi Cali sidoo kale lagu xukumay in muddo hal sano ah laga musaafuriyo gobolka Gedo.
Qaadiga maxkamada ayaa sidoo kale sheegay in Aamina Xasan Sabdoow oo 14 sano jir ah ay leedahay uur dhowr bilood ah, islamarkaana marka ay dhasho lagu fulin doono xukunka.